March 2017 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-03-31 15:00:202018-10-26 09:21:02Niqoodimoos
“Eenyuyyuu Akka isin hin dogongorsineef of-eegaa!”
“Eenyuyyuu Akka isin hin dogongorsineef of-eegaa!”Mat.24:4
Akka sirna Mana Kiristaanaa Ortodoksii keenyaatti soomiin guddichi yookaan soomii Gooftaa jedhamee kan beekamu; isa Gooftaan keenyi Iyyasuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta’uuf jecha soome kana keessatti torban jiran keessaa inni shanaffaan Dabra Zayitii jedhameetu beekama. Guyyaan kun Tulluu Ejersaan (Dabra Zayitiin) sababni itti moggaafame guyyaa kanatti kan yaadatamu, kan dubbifamu hundumtuu waa’ee dhufaatii lammaffaa Gooftaa keenyaa waan ta’eefi.
Gooftaan keenya, waa’ee dhuma biyya lafaafi waa’ee deebi’ee dhufuusaa kan dubbate Tulluu kana irratti dha. (Mat.24:3). Tulluun kun afaan Ibrootaan Har ha-Zeitim yommuu jedhamu afaan Arabootaan immoo Jabal al-Zaytun, Al-Tur jedhama. Afaan Ingliffaan immoo Mount Olive jedhama. Tulluun kun baha Iyyerusaalemiin kan argamuu fi ol-ka’insa lafaan meetira 818 yommuu ta’u Kiristoos wangeela iddootti barsiise, yommuu gara samiittis ol ba’u idduma kana waan ta’eef durii kaasee tulluun kun wiirtuu Kiristaanotaa addunyaa ta’ee tajajilaati jira.
Egaa akkuma Qulqulluun Maatewos barreessee nuuf dabarsetti, Gooftaa fi Fayyisaan keenyi Iyyasuus Kiristoos, guyyaa kanatti, tulluu kanarratti wanta fuulduratti ta’an hedduu Raajii dubbate dha. Kunis, fulduratti wantoonni hedduun akka raawwataman, keessumaa barri dhumaa yommuu dhiyaatu mallattooleen hedduun akka ta’an dubbateera.
“Ani Kiristoosidha” jedhanii maqaa Isaatiin ka’anii namoota baay’ee kan dogongorsan akka ka’an,
Addunyaarratti lolli akka baay’atuufi oduun lolaa akka tatamsa’u,
Uummanni uummatarratti, mootummaanis mootummaarratti akka walirratti ka’an,
Beelaafi goginsi akkasumas iddoo addaddaatti raafamuun lafaa akka mudatu,
Yeroo sanattis Kiristaanotni gidiraaf dabarfamanii akka kennaman; akka ajjeeffamanis, sababa maqaa Kiristoosiifis jecha namoota biratti kan jibbaman akka ta’an,
Raajonni sobduu akka baayyatan, namoota hedduus akka dogongorsan,
Jaalalli namoota gidduutii akka badduufi waan kana fafakkaatan erga dubbateen booda hanga dhumaatti kan cimee amantiisaatti dhaabate garuu akka fayyina argatu dubbateera.
Wantoota hedduu armaan olitti eeraman Kiristoos tulluu Ejersaarra taa’ee dubbate kana keessaa barreeffama kanaaf kan filatame “Eenyuyyuu akka isin hin dogongorsineef of-eegaa!” kan jedhu ta’a.
“Dogongora” kan jedhame maali?
Egaan jalabultii bara dhumaatti, yommuu dhufaatiin Kiristoos dhiyaatu, wantoota raawwataman keessaa raajotni sobdootaa baay’inaan uummata keessatti faca’uusaaniiti; maqaa Kiristoos waamudhaan uummata hedduus daandii ishee dhugaarraa baasusaaniiti. Kunis kan ta’u barumsa dhugaa hin taane, barumsa dogongoraa kan ta’e garuu isa dhugaa fakkeessanii barsiisuudha. Kunimmoo kan ta’u Kitaabni Qulqulluun Masiih (barsiisaa) sobaa jedhee kan dubbateefiif sanaaf haala mijeessuufi.
Barumsa dogongoraa kan jedhaman keessaas; Waaqummaa Kiristoos ganuurraa kan ka’e Abbaafi Afuura Qulqulluutiin gadi taasisanii Inni nama, Raajaadha, ergamaa dha, ammayyuu Abbaasaa fuulduratti nuuf kadhataafi waan kana fafakkaatuun uummata kan ittiin joonjessani dha. Karaa ishee qajeeltuufi duraa irraa adda ba’uun dogoggoruudha (Erm.6:16). Barumsa ishee dhugaarraa fagaachuun dogongoruudha (Rom.3:11). Waaqa kan ta’ee jiru Ilma Waaqayyoo Kiristoosiin “ammayyuu abbaa irraa nuuf kadhatee cubbuu keenya nuu dhiisisa” jedhanii amanuun dogongoradha (Yoh.16:26). Waaqayyo Ilmaatiin “Raajota keessaa isa tokko” jedhanii akka uumama tokkootti lakkaa’uun dogongora cimaadha (Maat.16:13-14).
Yeroo ammaan kana guyyuma guyyaan maqaa amantii addaddaan haaraa kan ka’an maqaa Kiristoos waamudhaani. Hundumtuu har’a ka’ee “anatu dhugaadha, Kiristoos nu biradha, Kiristoosiin fudhadhu” kan jedhan yerootii yerootti dabalaati jiru. Kunimmoo raaga isa waggoota kuma lama dursee Kiristoosiin dubbatameef ragaa ta’a. Fuuldurattis kan maqaa amantaan ka’anii “Kiristoos nu bira waan jiruuf koottaa” kan jedhan akka cirracha galaanaa akka dabalaa deeman dursee Raajiin dubbatameeraati.
Kan dursee hundaa’een alatti eenyuyyuu hundee kan biroo hundeessuu hin danda’u. Innis Kiristoos Iyyesuusi dha. Efe.2:20. Dubbii kana kan dubbate Qulqulluu Phaawuloos yommuu ta’u, sababni itti dubbateefis ykn barreesseefis yeroo duuka bu’oonni Gooftaa addunyaa kanarratti naanna’anii barsiisaa turan sanatti maqaa Kiristoosiin waamanii kan namoota dogongorsiisan waan turaniifi dha. Qulqulluu Phaawuloosis warra akkas maqaa Kiristoos waamani hojii addaddaa hojjetan kan “Obboloota Sobaa” ittiin jedha ture (Gal.2:4; Rom.16:17).
Kanaaf, yeroo ammaa kanatti obboloonni keenyi barumsa sobaan liqinfamanii dhugumatti Ilma Waaqayyo Isa dhugaa Kiristoositti kan amanan itti fakkaatee kan dogongora keessa jiraatan hedduudha. Asittis gamasittis, kaleessas har’as, boris maqaa Kiristoos Iyyasuusitti maxxanuudhaan “Kiristoos nu bira jira” kan jedhan ka’aniiru; fuuldurattis ni ka’u. Ilmi Waaqayyoo Kiristoos Inni dhugaan garuu, “Sobdoonni Kiristoosonnii fi raajotni ni dhufu (ni ka’u); hanga danda’anittis warra filataman hanga dogongorsanitti mallattoofi raajii addaddaa ni agarsiisu….Egaa, gammoojjii keessa jira yoo isiniin jedhan hin bahiinaa; tulluurra jira yoo isiniin jedhanis hin amaniinaa” Mat.24:24-26.
Kanarraa wanti hubannu tokko, yeroo addaddaatti maqaa Kiristoos waamanii barumsa sobaa barsiisaa kan turan ammas kan jiraniifi fuulduratti akka ka’an dha. Guyyaan kuni kan itti yaadatamus dhimmi ol’aanaan tokkos kanumadha. Yaadachuu kan barbaachiseefis, barumsaafi raajota sobaatiin akka hin dogongorreef, amantaa keenya ishee duraafi dhugaarraa akka hin maqneef, amantaa duuka bu’oonni barumsa Kiristoosirraa baratan itti barsiisan, abbootiin qulqulloonni hedduun kan keessatti argaman keessa jiraanne mootummaasaa akka dhaalluufi dha.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-03-17 07:27:032018-10-26 09:21:02“Eenyuyyuu Akka isin hin dogongorsineef of-eegaa!”